သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်ယုံကြည်နိုင်မလား။
သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်ယုံကြည်နိုင်မှုရှိမရှိ ကြည့်ရှုရန် ဤ Microsoft Edge အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြုပါ။
22 / 11 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ဟက်ကာများနှင့် လူယုတ်မာများ ထွန်းကားလာခြင်းကြောင့် အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးသည် စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်။ ဤလိမ်လည်သူများနှင့် ဟက်ကာများသည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ဘေးကင်းမှုကို အွန်လိုင်းတွင် အလျှော့အတင်းလုပ်ရန် လှည့်စားသည့်နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ စစ်မှန်သောပုံပေါက်သည့် ဝဘ်ဆိုဒ်အတုများကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့်၊ သို့သော် သင်အကောင့်ဖွင့်ပြီးသည်နှင့် သင့်ဒေတာများကို ထုတ်ယူပြီး အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဤအန္တရာယ်ကို တန်ပြန်ရန်၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဝဘ်ဘရောက်ဆာများ ဖန်တီးသည့် နည်းပညာကုမ္ပဏီများသည် သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဝဘ်ဆိုက်များအတွက် လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများနှင့် အစီရင်ခံစာများကို စတင်ထည့်သွင်းကြပြီး သံသယဖြစ်ပုံရသည့် ဝဘ်ဆိုက်ကို ရောက်သည့်အခါတိုင်း၊ ဘရောက်ဆာက သင့်အား သတိပေးပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင် သင့်အား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။ site ကိုလုံးဝ။ ခရိုမီယမ်အခြေခံသည့် Microsoft Edge ဘရောက်ဆာအသစ်တွင် ဝဘ်ဆိုဒ်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာကို ပါ၀င်သည် ၊ ဝဘ်ဆိုဒ်သည် လုံခြုံခြင်းရှိမရှိ၊ ကွတ်ကီးများဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် သင့်ထံမှစုဆောင်းထားသည့်ဒေတာများကို ပြသပေးသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာလည်းပါရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ သင်သည် သီးခြားဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့ သင်ဝင်ရောက်သည့်အခါတိုင်း သင်အကောင့်ဖွင့်ထားသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာတွင်၊ သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို သင်ယုံကြည်နိုင်မှုရှိမရှိကြည့်ရှုရန် Microsoft Edge အင်္ဂါရပ်ကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို သင့်အား ပြသပါမည်။
အဆင့် 2. URL ဘားတွင်၊ သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုသော ဝဘ်ဆိုက်၏လိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ကာ သင်နှင့်တူညီသောနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 3. ယခု၊ URL ဘား၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ 'လော့ခ်' အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
ဝဘ်ဆိုက်သို့ ချိတ်ဆက်မှု လုံခြုံမှုရှိမရှိ၊ ကွက်ကီးများနှင့် ဒေတာဝင်ရောက်ခွင့် ဆက်တင်များနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ခြေရာခံခြင်း ကာကွယ်ရေး ဦးစားပေးတို့ကို ပြသထားသည့် အခြေအနေပြဝင်းဒိုးတစ်ခု ပေါ်လာသည်ကို ယခု မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘတ် Microsoft Teams ကို Outlook တွင် ထည့်သွင်းရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း
ကွက်ကီးများနှင့် ခွင့်ပြုချက်များကဏ္ဍမှ၊ သင်သည် အမည်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသေးစိတ်များ၊ တည်နေရာအသေးစိတ်များနှင့် အခြားအရာများကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ကဲ့သို့သော သီးခြားဆိုက်တစ်ခုသို့ သင်ပေးလိုသော ခွင့်ပြုချက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် သင့်အတွေ့အကြုံကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဝဘ်ဆိုက်သည် သင်ဝင်ရောက်လိုသည့်ဒေတာကိုသာ ဝင်ရောက်နိုင်စေကြောင်း သေချာစေပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ သင့်အား မှန်ကန်သောအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ဝဘ်ဆိုက်မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်မည့် ဒေတာအချို့ရှိနိုင်ပြီး ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် သင်သည် သင်၏ခွင့်ပြုချက်ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
သင်သွားရောက်လည်ပတ်သည့်ဆိုက်သည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိလျှင် ကာကွယ်မှုပထမအလွှာမှာ သင်သည် ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုကို လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ပါက သို့မဟုတ် URL ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပြီး ဆိုက်သည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်နေပါက၊ လုံခြုံရေးပရိုဖိုင်ဝင်းဒိုးသည် သင့်အား သတိပေးချက်တစ်ခု ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော Google Earth ပေါ်က ပုံတွေ ဘာဖြစ်သွားလဲ။
နောက်တစ်ခု Amazon Prime Video ကဘာလဲ၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။